Ku soo celinta web: LisTop - Geofumadas
Ogast, 2008 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Akhrinta mawduucyada Cartesia waxaan ka helay boggaan, LisTop ee shirkad ah oo loogu tala galay bixinta adeegyada topoollada ee Chile.
Adeegyada la bixiyay, waxaan u maleynayaa inay tahay tixraac wanaagsan oo loogu talagalay macaamiisha Chile, maaddaama ay adeegyadooda kala duwan yihiin baadhitaannada ilaa codsiyada GIS. Waxyaabaha aan ka helay xiiso waa meesha laga soo dejiyey, halkaas oo ay leeyihiin qaar ka mid ah adeegyada farsamada.
U beddel dariiqooyinka dhibcaha si aad u hesho P (dhibic), N (Northing), E (Easting), Z (dherer), D (Description) dff file 2d ama 3d.
Qabashada 2D ama 3D waxay isku duwantahay Autocad, taas oo u oggolaaneysa in ay dhoofiso dhibcooyinka si loo falanqeeyo Excel.
Maqnaanshaha fogaanshaha Autocad, oo u oggolaanaya in dhoofinta dhibcooyinka loo gudbiyo faafinta Excel.
Waxaa sidoo kale jira Lisp xiiso leh oo ah AutoCAD si loo xakameeyo cabbirka qoraalka, wareegga qoraalka, is-beddelka 3D ilaa 2D iyo soo saarida iskudhafyada iyo sifooyinka dhibcooyinka ee AutoCAD.
Boggu waa midab, inkastoo foomka diiwaan-gelinta uu u baahan yahay inaad diiwaangeliso isku-dhafka xitaa haddii aad dooratid inaad ku sugan tahay waddan kale ... sidoo kale diiwaangelintu waxay goysaa qalad waali ah.
Sidaas u tag oo fiirso.
Post Previous«Previous Geofumadas, oo kooban oo kooban
Post Next GeoShow, oo ah Google EarthNext »
3 Jawaab in "Ku soo celinta web: LisTop"
Waad ku mahadsantihiin xogta Marcelo, waxaan tijaabin doonaa qalabka
Xogta aad u wanaagsan, inkastoo aan ku khilaafsan yahay sida ugu fiican ee bogga uu leeyahay, tan aniga ii ah, waxa ugu fiican waa barnaamijka bilaashka ah ee xisaabinta xarrag xiran oo si fiican u shaqeeya, sida farta farta.
Thanks to Listop iyo boggan, dabcan.
Waad ku mahadsantihiin macluumaadka iyo hambalyada goobta, waa mid ka mid ah fekerkeyga mawduuca ah, salaan.